Amazing Tour Heachal Tour | | Shayela @ + 91-993.702.7574 Ukubhuka.
Amazing Tour of Himachal Tour
Himachal, izwe okuyinto mesmerizes umphefumulo wakho. Ebusiswa ubuhle bemvelo, i-Himachal Pradesh iyipharadesi lezokuvakasha. I-Amazing Himachal Holiday Tour izokuthatha ekuhambeni kokuphila kwakho konke. Ukuhamba, ukugibela imifula, ukukhwela ngamatshe, ukuguqulwa, ukuxoxela kanye nokunye okuningi kungakujabulela Himachal, ngaleyo ndlela ikunike ithuba lokuzwa lesi sifunda ngendlela ehlukile futhi udale izinkumbulo ukuthi uyazisa yonke impilo yakho. Ngaphandle kokuzijabulisa, kukhona nethuba lokujabulela ubuhle bemvelo yemvelo e-Himachal. Futhi i-Amazing Himachal Holiday Tour iyindlela engcono kakhulu yokujabulela ubuhle bezwe. Le ndawo enhle ihlotshiswe ngokwemvelo ngezintaba ezihlanzekile ze-whitecap, iphunga eliyisimangaliso se-pine wood, indawo ephazamisayo. Kungakhathaliseki ukuthi uhamba nabagibeli bezinyosi noma ufuna ukuchitha isikhathi sekhwalithi nomndeni wakho, abangane ngesikhathi sokuphumula; le ndawo inamathele okuthile kuwo wonke umuntu. Memezela ubuhle bamagquma ngokugcwele ngamandla nge-Amazing Himachal Holiday Tour. Umbuso uhlukile ngokwemibono yayo yokuhlukahluka kwesimo sezwe kanye nobuhle obuhle bemvelo. Umhlaba we-Himachali unemignetism enjalo yokuphambana okuheha abantu abathandi bemvelo emhlabeni wonke. Hlola leli zwe elimangalisayo nge-Amazing Himachal Holiday Tour yethu.
CHANDIGARH (1NT) - SHIMLA (2NTS) - MANALI (3NTS) - DHARAMSHALA (1NT) - UDALHOUSIE (2NTS) - AMRITSAR (1NT) - CHANDIGARH
Uhlelo lwe-10 Nights | Ikhodi Yokuvakasha: 150
Lapho ufika e-Chandigarh sezindiza / isitimela sesitimela, thola & uhambe waya eShimla. I-Shimla, eyayiyinhloko-dolobha yasehlobo yaseBrithani eNdiya, ehlezi phakathi kweShivalik Mountains eneqhwa, inika imibono emangalisayo kakhulu yamaHimalayas anamandla. Lapho ufika eShimla ukungena ehhotela. (Ngobusuku eShimla)
Lolu suku ngemuva kokudla kwasekuseni uqhubekele ukuyobheka eduze naseShimla futhi uvakashele ku-Kufri. Ezingeni zamamitha angu-2,622, i-Kufri idume ngokuhamba ngezinyawo nokuhamba ngezinyawo, nemithambeko eqhwa nge-skiing nokubamba iqhwa. Ntambama uthathe uhambo oluhambayo lwaseShimla, uvakashele izintaba zeJakoo ezinikeza umbono we-panoramic wedolobha, iVice Regal Lodge noma uhambe endleleni. (Ngobusuku eShimla)
Lolu suku emva kokudla kwasekuseni Hlola uphinde uthumele ku-Manali. I-Enroute gcina amakhamera akho, ukuthatha izithombe zezindawo ezibukeka njengezinyosi ze-beas, isigodi sase-kullu, i-Dashehra maiden njll Lapho ufika Ngena ungena ehhotela. I-Manali iyindawo yokuqhafaza yesikhumba esiphezulu emamitha angu-1,929 abekwe phakathi kwezingqimba zeqhwa, ubuhle bukaManali bukhungethwe umfula wezinyosi ngamanzi ahlanzekile, ehamba edolobheni. Konke okuzungezile kubona izihlahla zemifino ne-pine, amasimu amancane nezithelo zezithelo zezithelo. Kusihlwa mahhala ngemisebenzi ngayinye. (Ngobusuku eManali).
Ngosuku olulandelayo ngemuva kokudla kwasekuseni ukuqhubeka nokubona indawo yaseManali, vakashela ithempeli le-450 elidala elizinikezele eHadimba Devi, elikhombisa ukuhamba kwezinto ezinkuni kakhulu. Hamba uvakashele uMan Temple noVashisht Kund, owaziwa ngamanzi ayo ashisayo esibabule. Kusihlwa mahhala ukuthenga kuthengi leMakethe yaseTibetan. (Ngobusuku eManali).
Lolu suku ngemuva kokudla kwasekuseni kwasekuseni kuqhubekela phambili ku-Snow Point emgwaqweni wakwaRohatang. Vumela ukumisa eSolang vallwy. I-Rohtang pass (ubude be-3940 amamitha) yi-51 kms ukusuka eManali, kodwa ngenxa yeqhwa elinzima eligubungelwe imigwaqo, lokhu kudlula akuvumelekile cishe izinyanga ezingu-8 zonyaka. Kusihlwa emuva kuManali nesikhathi sokuthola imisebenzi yokuzilibazisa yomuntu ngamunye. Uma imigwaqo eya eRohtang Pass ivaliwe bese uvakashela i-Snow Point (amahhashi / amahhashi angaqashwa ngokuqondile). Ngobusuku eManali.
Ibanga elingamakhilomitha angu-260 endleleni ehamba e-Baijnath eyaziwa ngeShiva yayo yeThempeli futhi eqhubeka nePalampur eyaziwa ngeTe Garden. I-Dharamhsala iyindawo ephakemeyo yezintaba ezibhekene nezintaba zeDhauladhar mayelana ne-18 kms enyakatho-mpumalanga ye Kangra, Iyaziwa ngobuhle bayo obuhle obubekiwe phakathi kwezihlahla eziphakeme zepine nemithi yama-oak. Kusukela ku-1960, lapho yaba isikhulu sesikhashana sobungcwele bakhe i-Dalai Lama, uDharamshala uye wavuka waba ngumuntu ohlonishwayo emhlabeni wonke ngokuthi "I-Little Lhasa eNdiya". Ihhotela le-O / N
Ngemuva kokudla kwasekuseni kuDharamshala ukuya ngaseDalhousie ngemuva kokubona indawo yasekhaya indawo ehlanganisa, ubungcwele bakhe Dalai lama yokuhlala eMc Leodgunj, i-War memorial, iBhagsunath nethempeli laseDal Lake. Finyelela kuDalhousie kusihlwa. Ihhotela le-O / N
UDalhousie uye waqanjwa ngegama likaMbusi waseBrithani - Jikelele wekhulu le-18, iNkosi Dalhousie. Izungezwe yizimila ezihlukahlukene - amapayipi, ama-dodders, ama-oki kanye ne-rhododendron yezimbali. Ukubukwa kwendawo yaseDalhousie kuhlanganisa ukuvakashela ePanjipula, Subhash Baoli kanye nokuvakashela eKhijiar 9 km ukusuka eDalhousie ehaqwe yihlathi elikhulu lamaDeodar. Idrayivu esuka eDalhousie eya eKhayjjiar iyamangalisa. Ihhotela le-O / N
Ngemuva kokudla kwasekuseni, hlola ehhotela bese udlulisela ku-Amritsar. Kamuva qhubeka nokuvakashela iThempeli le-Golden, Jalyanwala Bagh & Waga Border. Ngobusuku eMamritsar.
Lolu suku emva kokudla kwasekuseni Hlola uphinde ushayela ku-Chnadigarh. Lapho ufika ku-Chandigarh ukudluliselwa ukuze ungene ngemvume. Ngobusuku ku-Chandigarh.
DAY 11: CHANDIGARH - UMSEBENZI
Lolu suku ngemuva kokudla kwasekuseni, hlola ku-Hotel futhi uqhubekele uhambo lokubuka indawo ye-Chandigarh. Vakashela i-Rock Garden. Ukungena okungahlonipheki kuholela ekuhlelweni okwenziwe ngamatshe, amawashi, amaChinaware aphukile, amashubhu e-fluorescent alahliwe, ama-bellle aphukile futhi alahlekelwa ingilazi, ukwakha imfucuza, amalahle nobumba-bonke bafuna ukwakha umhlaba wezindlovukazi, amasosha, izinkawu, ukuphila komuzi, abesifazane namathempeli. Kamuva udlulisele ku-Chandigarh sezindiza / isiteshini sesitimela lapho uhambo luphela khona.